Toy ny Mpamonjy sa toy ny mpangalatra?
"Fa ho avy toy ny mpangalatra amin’ny alina ny andron’ny Tompo… Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin’ny maizina, mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany." 1 Tesaloniana 5:2,4
"Avy any (an-danitra) koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo." Filipiana 3:20
Hiverina tsy ho ela ny Tompo Jesosy. Ny fiverenany, izay hisy dingana roa miavaka, dia aseho amin’ny toetra roa samy hafa: toy ny fiverenan'Ilay Mpamonjy nandrasana, na toy ny fiavian’ny mpangalatra.
Ny fiavian’ny mpangalatra dia voamarika toetra telo: tsy nirina, tsy nampoizina, ary mampahantra izay sendra azy. Mifanohitra tanteraka amin’ny fomba hahatongavan’ny Tompo Jesosy haka ny olony!
Irina ny fahatongavany: ambaran’ny apostoly Petera amintsika fa na dia tsy mbola hitantsika aza Izy, dia tiantsika, ary isika dia miravoravo “amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra”. Ny apostoly Paoly dia miresaka ireo “rehetra tia ny fisehoany” sy ny “fanantenana mahafinaritra” ananantsika (1 Petera 1:8 "Izay, na dia tsy mbola hitanareo aza, dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa, satria inoanareo, dia iravoravoanareo amin’ ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra."; 2 Timoty 4:8 "Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa."; Titosy 2:13 "Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy").
Andrasana Izy: ireo mino ny fampanantenana nomeny dia tondroina ho “izay miandry Azy”. Ny mpanaraby izay manao amin’izy ireo hoe: “Aiza ny teny fikasana ny amin’ny fiaviany ?” dia valiany amin’ny Soratra Masina hoe: “Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany” (Hebreo 9:28; 2 Petera 3:4,9).
Hampanankarena ny olony Izy: Hampitafian’i Kristy tena vaovao, mitovy amin’ny “tenan’ny voninahiny” izy ireo; ary hampahazoany ny lovany mandrakizay (Filipiana 3:20-21; Hebreo 9:15).